Ex Madaxweyne Silaanyo Oo Codsi Ay Shirkada DP World Usoo Dhiibtay Ula Tagay Madaxweyne BIIXI Iyo Jawaabta Uu Ka Helay.
Hargaysa(Gebogebonews)-Maxadwaynihii hore siilaanyo ayaa codsi ula tegay shaqada looga baahnaa shirkada DP World ula tagay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Sida uu xildhibaan ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somaliland oo ka gaabsaday in aan magaciisa shaacino u sheegay saxaafada, Madaxweynihii hore ee somaliland Md Axmed Siilaanyo ayaa ka codsaday madaxweyne Muuse Biixi inuu shirkada DP World u kordhiyo mudada looga baahnaa inay balaadhinta ku samayso dekeda magaalada Berbera.
Xildhibaanka oo ka hadlaya codsiga Axmed Siilaanyo ula tagay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu yidhi “Waxa jirta in madaxweynihii hore Axmed Siilaanyo oo masuul ka ahaa baaba dalka ka dhacay ayaa maanta ku soo gurya noqday dalka isaga oo talo u sida Muuse Biixi kuna yidhi laba sanadood u kordhi DP World balaadhinta dekeda lagama gaadhsiiyee waa ayaan daro, arinkaasna waxaan maqlay in madaxweyne Muuse Biixi uu ka walaacay mana hubo inuu taladaas ka yeelay iyo inaanu ka yeelin.”
Sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in shirkada DP World uu ka dhacay wakhtigii ay balanqaaday inay ku balaadhinayso dekeda Berbera waxaanu yidhi “Hantida la soo celinayo waxa ka mid ah dekeda caalamiga ah ee Berbera oo maanta ay dhamaatay mudadii ay DP World balanqaaday inay ku balaadhinayso.”
Codsiga uu madaxweynihii hore ee somaliland Md Axmed Siilaanyo ula tagay madaxweynihii badalay ayey wararku sheegayaan inay u soo dhiibtay shirkada DP World, iyada oo ay hada muuqato inuu gabaabsi ku dhaw yahay wakhtigii ay shirkadaasi qabsatay inay ku balaadhiso dekeda Berbera balse aanay ilaa hada qaban wax muuqda.